‘एमसीसी फिर्ता गयो भने मुलुक ६ महिनाभित्रै सोमालिया बन्छ’- नेता झा – Cn Chautari
माघ २७, २०७८ बिहिबार 656
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नगरे ६ महिनामित्र मुलुक सोमालिया बन्ने दाबी गरेका छन् ।नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रममा कुरा गर्दै नेता झाले भने, “एमसीसी विशुद्ध रुपमा अमेरिकी विकास अनुदान हो । नेपालसँग स्रोत छैन ।
कुनै न कुनै देशको सहयोग लिनैपर्छ । यसलाई देश विकासका निम्ति उपयोग गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई कम्युनिस्टका खोल ओडेका खाओवादीले झूटो कुरा गरेर जनतामा बदनाम गरिरहेका छन् ।मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सहमति गरेर ।
आएको एमसीसी एक दिन पनि ढिला नगरी पारित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । झाले थपे, एमसीसी पास गर्नैपर्छ । एमसीसी फिर्ता गयो भने मुलुक ६ महिनाभित्रै सोमालिया, भेनेजुयला, अफगानिस्तान, श्रीलंका बन्छ । जनताको हितभन्दा ठूलो केही पनि हुन सक्दैन । विश्वमा हराइसकेको कम्युनिस्टको ।
अवशेष अब नेपालमा पनि अन्त्य हुनुआवश्यक छ ।” प्रचण्ड र माधव नेपालले अब धेरै ढोंग गर्न नसक्ने लोसपा नेता झाको जिकिर छ । उनले भने, “प्रचण्ड र माधव नेपालले सार्वजनिक रुपमा आजको ।
दिनसम्म एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन भनेर बोलेको मैले सुनेको छैन । उनीहरुका नेताकार्यकर्ताले यसबारे भ्रम फैलाइरहेका छन् । उनीहरु कहाँ कहाँबाट परिचालित छन् ?
Prevलिपुलेक कालापानी भारतले मिच्दा हिजो ओली सरकारलाई प्रश्न गर्ने गगन’ विश्वप्रकाश कहाँ छन अहिले कि देश जोगाउने जिम्मा ओलिको मात्र हो : रबि लामिछाने
Nextओहो, आयो आज एमसीसीको देउबा र प्रचण्डलाई एस्तो कडा सन्देश, अब के होला एमसीसी !
प्रचण्ड चलाख नेता हुन् अमेरिकालाई समेत झुक्न बाध्य बनाएर एमसीसी पास गरे: रामचन्द्र पौडेल